DOWNLOAD ALREADER HO AN'NY ANDROID - ANDROID - 2019
AlReader ho an'ny Android
Ankehitriny, karazana marika marobe no ampiasaina, ohatra, ny kaody QR izao dia heverina fa malaza sy mahaliana indrindra. Ny raki-tsoratra dia vakina amin'ny code amin'ny fampiasana fitaovana sasany, fa amin'ny tranga sasany dia azo avy amin'ny rindrambaiko manokana izany. Handinika fandaharan'asa mitovy amin'izany isika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ny famakiana ny code ao amin'ny QR Code Desktop Reader & Generator dia vita amin'ny iray amin'ireo fomba maro samihafa: amin'ny fisintonana ampahany amin'ny birao, avy amin'ny webcam, clipboard na rakitra. Rehefa vita ny fanitsiana, dia hahazo ny famafana ny lahatsoratra izay voavonjy ato amin'ity marika ity.
Ankoatra izany, ny programa dia manome ny mpampiasa ny fahaizana manamboatra ny code manokana. Mila mametraka lahatsoratra fotsiny ianao, ary ny rindrambaiko dia hanao mari-pamantarana maromaro. Aorian'izany dia ho afaka hamonjy azy amin'ny PNG na JPEG na mandefa kopia any anaty bokotra.
Download QR Code Desktop Mpamorona sy Generator
Ny solontenan'ny manaraka dia ny programa Descriptor BarCode, izay manatanteraka ny asan'ny famakiana code barcode tsotra. Ny hetsika rehetra dia tanterahana ao anatin'ny varavarankely iray. Ny mpampiasa dia takiana fotsiny hiditra ny laharana, ary avy eo dia hahazo mari-pamantarana marika sy fampahalalana momba izany izy. Mampalahelo fa ity no endriky ny endriky ny programa.
Download Barcode Descriptor
Amin'ity, dia nifidy programa roa izahay mba hamakiana karazana marika roa samihafa. Manao asa tsara izy ireo, tsy mandeha lavitra be ny fanodinana ary ny mpampiasa dia mandray avy hatrany ny fampahalalana voamarik'io kaody io.